I-COD Cold War Hacks 🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack-Gamepron
COD Imfazwe ebandayo ethubeleza
Lawula ngendlela obuya kwenza ngayo nakweyiphi na enye into ngesihloko seCall of Duty usebenzisa i-COD emnyama ye-Ops Cold War hacks! Ngezixhobo zeGoldpron uya kuphumelela, ngaphandle kwesakhono sakho.
Sele uyithengile i-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Phambi kokuba uthenge i-COD Black Ops yethu: iiMfazwe eziBandayo, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo Hacks
I-COD Black Ops: IHold War Hacks, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Thenga I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha i-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo kuluhlu olubanzi lwemidlalo apha kwiGamepron apha
Khetha zonke izinto obukade uzifuna! Sinayo yonke into oyifunayo
Yenza intlawulo yakho usebenzisa iprosesa yethu yokuhlawula ekhuselekileyo ye-100%, ukuqinisekisa ukhuseleko lwabathengi
Fumana ukufikelela kwisitshixo sakho kwaye ukhuphele i-chea
Emva kokuba uthenge isitshixo semveliso ungafikelela kwaye ukhuphele iiHacks zethu zemfazwe ebandayo!
Kutheni usebenzisa i-Gamepron COD Black Ops: iiHacks zemfazwe ebandayo?
Ixesha leMfazwe ebandayo ye-Black Ops 4 Ukuhlaziya kwakhona kulapha, kwaye yongezwa kwimephu entsha yeZombies kunye nemephu entsha yabadlali abaninzi, Rush. Ukuba ubujikeleze ngeentsuku ze-Black Ops II, ngekhe ukhumbule ukungxama kunye nendlela abadlali abayithande ngayo. Ukuqala izinto nge-bang, kukho uluhlu lokudlala olukhethekileyo lwepeyinti olubekwe kuRush, ngokunjalo.
Ixesha lesine leMfazwe ebandayo ye-Black Ops ifikile kwaye inemephu ezimbalwa kubandakanya i-classic ethathwe kwi-Black Ops 2. Kunye nokongezwa kwezi mephu zintsha, ixesha elitsha likwanazo nezinye izixhobo, kubandakanya umpu we-C58 kunye neMG. I-82 LMG efumaneka ngokudlula kwidabi.
I-Call of Duty Black Ops Imfazwe ebandayo isandula ukubona ukukhutshwa kweXesha lesi-3 elilayishwe ngokutsha, elongeza izixhobo kunye neendlela zemidlalo yeZombies. Ecaleni kwayo, sikubonile ukukhutshwa komsitho wee-80s Action Heroes, owongeze uRambo noJohn McClane kumdlalo njengezikhumba zomqhubi kwiinyanda zabo.
I-Gamepron ithathelwe ingqalelo njengomboneleli okhokelayo xa kufikwa kwi-Call of Duty hacks kangangeminyaka, kwaye loo mava kuphela asivumele ukuba siphuhlise eyona nto ibalulekileyo yeMfazwe ebandayo. Nangona lo ngumdlalo omtsha kraca, ungalindela ukufumana amandla okumisa afanayo afunyanwa nakwesiphi na isixhobo se Gamepron- ngalo lonke ukhuphelo lobunzima obutsha luphoswa kumxube, kodwa umnxeba wethu weDuty Black Ops Cold War hacks iya kuhlala ikugcina ulungile Ukuba ungumdlali okhuphisanayo okhuphisanayo kwaye ulahlekelwe yinto engekhoyo kwisigama sakho, ukusebenzisa ubuqhophololo beMfazwe ebandayo kuya kuqinisekisa impumelelo yakho kwimowudi nganye yomdlalo. Nokuba uzama ukudlala iWarzone okanye iMultiplayer, usebenzisa i-Gamepron kunye ne-COD Black Ops Cold War cheat yakho iya kukugcina uphambili kwabo ukhuphisana nabo.
Nokuba uhlala kwigumbi lokubila kwaye kuya kufuneka unyuse izinto phezulu, okanye uzama ukulwa indlela yakho yokuphuma kwimeko engenakwenzeka, usebenzisa i-Black Ops Cold War cheat yakho iza kupompa ubomi kumdlalo wakho . Awunyanzelekanga ukuba ujikeleze imephu kwaye uthandaze ungalwi, ungawuthatha umlo ngqo kwiintshaba zakho xa usebenzisa izixhobo ezivela kwiGamepron!
Iqela leengcali liyilo elenza iGamepron, ngokuchaseneyo nje nokwenza ezinye izixhobo kwigumbi elingaphantsi labazali. Zonke iimveliso zethu zenziwe "ngabaculi bokuqhekeza" ngokuthetha, oko kuthetha ukuba uhlala ufumana imali yakho. Ukuchitha imali kwizixhobo ezingafanelekanga ayizukugcwalisa ngokuzisola kuphela, kodwa kuya kuyikhupha neakhawunti yakho yebhanki. Uya kuqhubeka uzama emva komnye ude uqonde ukuba sasinyanisile! Indawo ekuphela kwayo enezixhobo ezinokuthenjwa zemfazwe ebandayo yiGamepron, kwaye xa sele uzizamele ngokwakho, uyakube ucula ingoma enye.
Abasebenzisi bethu banokugcwala ngokuzithemba, njengoko konke ukukhutshwa kwiGamepron kuxhotyiswe ngokhuseleko lokulwa ukukopela. Iiakhawunti zakho zisezandleni ezilungileyo nathi, kuba uninzi lweenkonzo ezizenzekelayo zokufumanisa ukukopela azizukufaka iflegi kwiakhawunti yakho ngelixa sisebenzisa i-COD Black Ops Cold War hacks. Ukuba unayo iakhawunti endala okanye enye ikwinqanaba eliphezulu, awunyanzelekanga ukuba ubeke yonke loo nkqubela emngciphekweni ukonwabela ukukopela kwethu. Ii-hacks zethu zibonisa olona khuseleko lwanamhlanje lokulwa nokukhohlisa, ke phefumla ngokulula! Indlela eya phezulu ilula apha eGamepron.
Imfazwe ebandayo iWall Hack (ESP)
Ulwazi loMdlali obandayo obandayo ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Imfazwe ebandayo Into ESP enezihluzo
Imfazwe ebandayo iAimbot
Imfazwe ebandayo imo yokutsiba enkulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza).
Imfazwe ebandayo ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Umlo obandayo ubuyisa umbuyekezo
Ngokufanelekileyo I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo yimfumba Iimbonakalo
I-COD Black Ops: Umdlali obandayo weMfazwe ebandayo
Jonga ukuba lukhona phi utshaba (kunye nabalingane bakho) ngokunika amandla umdlali we-ESP. Amachaphaza omdlali obala kunye nolunye ulwazi oluluncedo oluvela kuyo yonke imephu!
I-COD Black Ops: Ingcaciso yoMdlali weMfazwe ebandayo ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Funda ngakumbi malunga neentshaba kunye nezinto ezikumdlalo ngaphandle kokuzibona ngqo. Nika amandla uLwazi loMdlali i-ESP kunye neempawu zokufikelela njengegama, impilo, kunye nomgama.
I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo Into ye-ESP enezihluzo
Ukuba udlala iWarzone ungayifumana ngokulula, okanye uphephe i-claymores kwi-intanethi! Le nto i-ESP ikwacwangcisa ulungiselelo lokucoca ulwelo ngokulula.
I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo iAimbot
I-Aimbot ihlala iyinto ebalulekileyo kuyo nayiphi na iMfazwe ebandayo, kwaye yiyo loo nto singakhange sibambe naziphi na iipunch ngale nto. Yoyisa iintshaba ngokulula usebenzisa i-Gamepron!
I-COD Black Ops: Umkhondo obandayo weBullet umkhondo (osebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Umkhondo weBullet uya kuvumela abasebenzisi ukuba babone apho kufikelela khona izithonga, ukubanika ithuba lokuchonga (kunye nokuqinisekisa) ukubulala ngokungxama. Akukho sidingo sokubuza ukuba uphumelele umlo.
I-COD Black Ops: izilumkiso ezilumkisayo zotshaba
Imfazwe ebandayo inqaku elisisilumkiso liza kubonisa umyalezo owenziwe kwiscreen nanini na xa utshaba lujolise kuwe okanye lusenzeka kufutshane.
I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo imo yokutsiba kakhulu (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo)
Imowudi yokutsiba iluncedo ngokukodwa kwi-COD yethu emnyama ye-Ops yeMfazwe ebandayo. Thintela ukonakala kokuwa kunye neplummet evela esibhakabhakeni ngale nto!
I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
Ii-Aimbots zilungile kuphela kuseto olunxulunyaniswa nazo, kwaye iMfazwe ebandayo ye-aimbot ikunika ithuba lokuhlengahlengisa phantse nantoni na.
I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo iitshekhi ezibonakalayo
Ukutshekishwa okubonakalayo kuya kumisa i-aimbot yethu ekujolise kuyo ngokuzenzekelayo kwiintshaba ezingenakudutyulwa ngobuchwephesha, okuya kunceda ukuthintela intshukumo ejongeka ngathi ikrokrela ingenzeki.
I-COD Black Ops: Ukubuyiswa kweMfazwe ebandayo
Ukubuyiswa kwakhona kube ngumcimbi ocacileyo xa kufikwa kubizo lweDuty, kwaye iMfazwe ebandayo yahlukile. Yilahle ngokwenza iRecoil Compensator yethu!
Yiba ngumnxeba ongcono weDuty player namhlanje ngokufumana ukufikelela kwezona zinto zibalaseleyo kwiMfazwe ebandayo kwi-Intanethi. Ayinamsebenzi into ojonge ukuyiphumeza kunye nokukhohlisa kwethu, siza kuyenza yenzeke-yonyusa umlinganiso we-K / D, uphumelele imidlalo emininzi, kwaye wonwabe ngakumbi ngokubanzi usebenzisa i-Gamepron! Ulibale ngabo bonke abanye ababoneleli ababoneleli nto ngaphandle kwethemba lobuxoki kwaye basebenze nathi
I-COD Black Ops eyaziwayo: iiHacks zemfazwe eziBandayo kunye nokukhohlisa
I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo i-ESP kunye neWallhack
Ezinye ii-Ops ze-COD eziMnyama: iiHacks zemfazwe eziBandayo kunye nokukhohlisa
Eyona Fowuni yabasasazi yabadlali ihlala ineyona COD Black Ops Cold War hacks kwicala labo, kuba ayikaze ibuhlungu ukuba nesixhobo onokubuyela kuso. Nokuba awucwangcisi ukukhahlela "ngokusisigxina", ukubanakho ukubala ukukopela kwethu eMfazwe ebandayo ngexesha lokulwa okunzima kusalungile. Nokuba usengumqali okanye umkhangeli onamava akunamsebenzi, njengoko siqinisekisile ukuba sizisebenzisa ngokulula ezi zixhobo. Sifanele ezona mpawu zaziwayo zifumaneka kwiMfazwe ebandayo kwisixhobo esinye esimangalisayo, zonke ziyafumaneka ngexabiso elinye! Akukho sidingo sokujonga ngakumbi ukuba ubusakhangela ubuqhetseba boMlo obandayo oza kunika amandla ngakumbi kunokuba ubulindele, njengoko iGamepron ilapha ukuzisa.
Eyona COD Black Ops Cold Hacks kunye nokukhohlisa ziya kubandakanya i-Aimbot, i-ESP, iFootprint, kunye nezinye izinto ezinceda umsebenzisi ukuba aphumelele ngokulula.
Ii-Aimbots azisoze zityeshelwe ngelixa usenza uphando ngee-hacks (okanye ubuncinci, akufuneki zibekho!). Zibe zizinto ezisisiseko sehacks ezininzi kule minyaka idlulileyo, zihlala zinxulunyaniswa nemidlalo yokudubula- njengoko ubona, ukuba nokuchaneka okungathethekiyo kuya kukunceda ngeendlela ezininzi. Nokuba kuzimela iintshaba ukugcina oogxa bakho begqunyiwe, okanye ukudlala nje indima eyingcuka kunye nokubulala ngokuthanda, ukusebenzisa i-COD Black Ops cheats War War kuyakuvumela ukuba uyenze. Esi sisixhobo sobabini kunye nabadlali beqela kuba unokuhlengahlengisa amanqaku ukuze ulingane iimfuno zakho ukuya ezantsi tee.
Asenzanga ubungakanani obulinganayo obulungele yonke into, kwaye ithambo elinokuqwalaselwa kunye neenjongo eziphambili zokhetho zenza ukuba kubonakale. Ukuguqula i-aimbot kwaye ucime ngokulula usebenzisa imenyu yethu yomdlalo, kulapho unokuhlengahlengisa ukuthandwa kwesangqa sakho se-FOV.
Ii-hacks ze-ESP zezona zininzi zabakhohlisi sele beqhele ukuzisebenzisa kuba zithembekile nje. Nokuba uzama ukufumana inzuzo ngaphezulu kweentshaba zakho okanye ujonge nje ukuphanga ngesantya, ukusebenzisa i-ESP kunye neWallhack kuya kukunceda kakuhle. Ungababona bobabini abadlali kunye nezinto ezenziwa ngeMfazwe ebandayo ye-ESP, ngenxa yoko i-claymores kunye nezinye izixhobo zokuqhushumba aziyi kuphinda zikumangalise. Uninzi lwabadlali boyika kakhulu ukuwela imephu ngenxa yeengozi zokuzimela kwikona nganye, kodwa ngoku ungabaleka ngokuzithemba! Akukho nto inokufihla kwiliso lakho elibona konke, kwaye enkosi kwi-Cold War ESP kunye neWallhack.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ungazibona iintshaba ezivela kuyo yonke indlela kwimephu! I-ESP imele uPhononongo olongezelelweyo lweSensory, kunye nokwenza ukuba eli nqaku likuvumele ukuba ubone iimodeli zomdlali (kunye neemodeli zezinto) kwiindawo eziqinileyo / eziqaqambileyo. Ngoku uyazi ukuba akukho nto ime endleleni yakho eya empumelelweni!
Sinikezela ngaphezulu kweempawu zemveli zemveli apha kwiGamepron, kwaye umzekelo ogqibeleleyo kufuneka ube kukhetho lwethu lokunyathela. Unokwenza ukuba eli nqaku lilandelele iintshaba zakho zisebenzisa iinyawo zazo, ezinokuthi zenziwe zichaneke ngakumbi ngombonakalo webanga. Umgama uya kukwazisa ukuba ikude kangakanani into ekujolise kuyo, ngenxa yoko ngekhe ulandelele umntu kwaye ungazi ukuba baphi. Ukuba umntu ubambelela kwiindlela zakho zokulandela umkhondo, banokukukhokelela ekulaleleni, kodwa oko akunakwenzeka ngomgama owenziwe ukuba usebenze. Ukubetha nzima kunabachasi bakho kuya kuzisa amathuba okuphumelela ngokwendalo, kwaye kulapho ke khona Umonakalo oMkhulu uza emfanekisweni.
Umonakalo omkhulu uza kwenza ukuba lonke inani lakho lokudubula, lijolise kuphela kwiindawo ezibulalayo zomzimba kwiintshaba zakho. Ukuphulukana nemipu kunye nokusokola ukulandelela abachasi ziindlela ezimbini eziphambili zokuzifumana usecaleni lokuphulukana, ke sebenzisa esi sixhobo ukunqanda yonke loo nto.
Thatha indlela eyahlukileyo kwinkqubo yakho yokugenca ngokufumana ukufikelela kuthi COD Black Ops cheats Imfazwe ebandayo namhlanje. Zonke izixhobo zethu ziza kuza neempawu ezongezelelweyo ongasokuzifumana rhoqo, ezinye zazo zifumaneka ngokukodwa kwiGamepron. I-Radar yenye yezona zinto ziluncedo onokuzisebenzisa ngelixa usebenzisa iiMfazwe eziBandayo kuba ukwazi imeko yeentshaba zakho kuyanceda! Unokulukuhla
ukubafaka emigibeni okanye kuthintele naziphi na iindawo zokuzilungiselela abazibekele zona, kunye nokulungiselela umlo ngokukhawuleza kunabanye. Uza kuyalela isantya semidlalo yakho ukukopela kwi-Black Ops Cold War, kwaye loo nto iyodwa yanele ukuya phambili.
Ukususwa luphawu oluvumela umdlali ukuba asuse ezinye zezinto ezicaphukisayo ezinxulunyaniswa noMnxeba woMsebenzi wemidlalo. Nokuba kuyabuyela umva, ukutshaya, ukujija, okanye ukonakala komonakalo, ungathembela kwisixhobo sethu sokukunceda uphumelele nakweyiphi na imeko.
I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo iHacks imibuzo
Kutheni i-COD yethu emnyama i-Ops: iiHold War Hacks
I-Gamepron iye yahlala izinikezele kumsebenzisi ukusukela oko sasisungula, kwaye yile nto yenza ukuba cheats zethu zithembeke. Ukuphucula amava omsebenzisi wabathengi bethu yeyona nto iphambili, kwaye ungatsho ukuba sikhathalele ngomgangatho wokukhutshwa kwakho ngokuzisebenzisa ngokwakho. Yiba lilungu lenkonzo yokuqhekeza ithandwayo ekhoyo kwi-intanethi namhlanje kwaye usijoyine kwiGamepron.
Kutheni i-COD yethu emnyama Ops: Imfazwe ebandayo iAimbot
Ukuchaneka ayikhe ibe yingxaki xa usayine i-Gamepron kuba i-COD yethu emnyama ye-Ops Cold War ilungiselelwe imeko ye-aimbot yobugcisa. Unokuhlengahlengisa useto ukuze i-aimbot ilungele iimfuno zakho, ngokuchaseneyo nokunyanzelwa ukuba usebenzise useto lwefektri ngalo lonke ixesha! Qwalasela isantya, ukutyibilika, kunye neethagethi eziya kuthi ziqhubeke.
Kutheni i-COD Black Ops yethu: Imfazwe ebandayo i-ESP
I-ESP ithetha ukujonga okungaphezulu kokuziva, okuphantse kufana nokongeza uluvo olongezelelekileyo! Nangona benokwahluka kumgangatho, i-Gamepron ineyona Ops ye-Black Ops ifanelekileyo kwi-intanethi. Ungasebenzisa i-Player yethu i-ESP ukufumana iintshaba kunye nabalingani beqela, kunye ne-Item ESP yethu (eneefilitha) ukufumanisa apho kukho izinto eziluncedo kunye neziqhushumbisi eziyingozi.
Kutheni i-COD yethu emnyama Ops: Imfazwe ebandayo iWallhack
I-Wallhacks ngandlel 'ithile ikhethekileyo apha kwi-Gamepron, ke kwabo bafuna ukwazi ukuba awuphoswa nayiphina inyathelo, i-COD Black Ops Cold War cheat yakho ikulungele. Ungayibona yonke into ngomphezulu oqinileyo kunye opaque, uvumela abasebenzisi bethu ukuba babone ingozi ngeendonga. Cwangcisa kwangaphambili kwaye ubothuse abachasi bakho xa bengayilindelanga!
Kutheni i-COD yethu emnyama Ops: Imfazwe ebandayo iNorecoil
Nawuphi na umdlalo wokudubula okhutshwe kwintengiso yanamhlanje uya kubonisa ukubuyela kwakhona njengendlela yokwenza ukuba ukujolisa kube nzima. Abanye abantu banokuziqhelanisa kwaye bachithe iintsuku zabo befumanisa ukuba zeziphi izixhobo ezinelona nani lincinci lokuphinda ubuye, kodwa abasebenzisi bethu kwiGamepron baya kuhlala behlakaniphile kunoko! Susa ukubuyela umva kwaye ugcine ujongo lwakho luzinzile kunye noMhlaziyi-mbuyekezo wethu.
Ungazikhuphela njani ezona COD ziMnyama ziBalaseleyo: Imfazwe ebandayo hacks?
Ukukhuphela i-COD Black Ops Cold War cheat akukaze kube lula! Nje ukuba uthenge isitshixo semveliso yakho, ungayisebenzisa ukufikelela kukhuphelo lwethu lokukhuphela kwaye uqalise ukukhuphela ukukopela kwethu. Akukho sidingo sokukhathazeka ngofakelo nokuba, kuba akukho mfuneko yokuzifaka ngesandla izixhobo zethu - yonke into iyazenzekelayo, konke okufuneka ukwenze kukusungula i-hack.
Kutheni le nto i-COD yakho emnyama ye-Ops: Imfazwe ebandayo ibiza kakhulu kunezinye
Awusoze ushiywe eluthulini ngeGamepron, njengoko ukhuseleko lwethu luphezulu. Abanye ababoneleli bajonge kuthi ukuze bakhuthaze malunga noku, njengoko singekhe sivumele abasebenzisi bethu bajongane nokuvalwa! Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa sinenani eliqingqiweyo leendawo zokubeka ezifumanekayo ekukhohliseni uMlo obandayo nangaliphi na ixesha. Ezo zinto zimbini zidibeneyo zikhokelela kwixabiso eliphezulu kancinci!
Ukuba awufuni kufumana ukufikelela ixesha elide kwi cheats zethu, ungakhathazeki ngayo! Asisoze sabamba ukubanjwa kwabasebenzisi bethu ngokubanyanzela ukuba bahlawule ukufikelela ixesha elide kunokuba bebengathanda, njengoko sibonelela usuku-olu-1, i-1-iveki, kunye nemveliso yenyanga ye-1 yenyani kwimveliso yethu ebandayo. Abanye ababoneleli ngeempazamo baya kukunyanzela ukuba uzibophelele kuwo wonke unyaka ngamanye amaxesha, kodwa i-Gamepron ihlala iguquguquka ngalo lonke ixesha.
Kuhle I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo yimfumba Iimbonakalo